23 Februweri, 2004, 17:38 GMT; 20:38 SGA
Ergada Soomaalida oo ansixisay heshiiskii Nairobi
Kooxaha Soomaalidu wey ansixiyeen heshiiskii 29-kii ay gaareen kooxaha Soomaalida, laakiin dad baa weli ka shaki qaba sida ay dhabayn karaan
Waxaa gelinkii dambe ee maanta xarunta Mbagathi ee duleedka magaalada Nairobi lagu ansixiyey is-beddelkii lagu sameeyey axdiga KMG ah ee ay ku dhaqmi doonto dowladda la sameyn doono shanta sano ee soo socota.
Xafladdaasi lagu ansixiyey heshiiskii hotel Safari ay ku gaareen hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed 29-kii bishii hore waxaa uu qodobka ugu weyn ee dadka qaar ka murmayeen uu ahaa qodobka soddonaad ee heshiiska oo ka hadlay habka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka ee ay dowladda soo socota yeelan doonto.
Waa maxay qodobka 30-aad?
Qodobkani 30-aad waxa uu qorayaa waxaa golaha shacabka soo xulaya hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee jilib, jufo-hoosaadyada beelaha oo lagu martiqaaday shirkii wada tashiga ee Nairobi ee billowday 9-kii bishii Jannaayo, kuwaasoo ka kooban dowladda KMG ah, Golaha samatabixinta, golaha SRRC-da, maamul-goboleedyada jira, kooxda siddeedda ah iyo ururrada bulshada rayidka ah, waana in hoggaamiyeyaasha dhaqanka rasmiga ah ee beeluhu ay ansixiyaan.
Haddaba, hoggaamiyeyaasha ay ka mid ahaayeen Colonel Cabdullaahi Yuusuf iyo Salaad Cali Jeelle oo ka socda maamulka Jowhar ayaa ku cel-celiyey in la caddeeyo cidda ay yihiin hoggaamiyeyaasha, iyagoo gaar ahaanna farta ku fiiqay in tirada hoggaamiyeyaasha laga kordhiyey sidii ay ahaayeen xilligii Eldoret.
Codsiga Cabdullaahi Yuusuf
Cabdullaahi Yuusuf waxa kaloo uu codsaday in dhammaan dowladaha IGAD la wada keeno shirka inta aanan loo gudbin xulidda baarlamaanka, isagoo ka dhawaajiyey in aanay Soomaaliya u baahnayn dowlad qash-qashaad kale ku keenta wixii loo asaaso Soomaalida, taasoo ay cid kasta garatay wixii uu ula jeeday.
Ergayga gaarka ah ee dowladda Kenya u qaabilsan Soomaaliya, Mr Bethuel Kiplagat, ayaa dhowr jeer ka jawaabay su'aalahooda isagoo soo xusay in ergada Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen 15-kii Septembar ee sannadkii hore in la ansixiyey axdiga, haatanna waxa la doonayo ay tahay oo keliya is-beddelkii yaraa ee lagu sameeyey, wuxuuna ummadda Soomaaliyeed ku boorriyey in aanu aayaha Soomaaliyeed cidna u afduubnaanin.
Wasiir-ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kenya, Moses Watangula, oo ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey ee meesha ayaa isaguna ka codsaday Soomaalida in ay dalkooda iyo dadkooda u daneeyaan oo ay iska daayaan rabitaanka shakhsiga ah.
Markii ugu horreysayba guddoonka ergooyinka oo ay ka mid ahaayeen Shariif Saalax, Xasan Abshir, Xuseen Caydiid iyo Mowliid Macaani ayaa markii ugu horreysayba caddeeyey sida ay u taageersan yihiin heshiiska iyo in ay tahay in loo gudbo wejiga saddexaad.
Fursadda ergada ka siiyey
Waxaa waxooga waqti ah la siiyey qaar ka mid ah ergada oo iyaguna fikradahooda halkaasi ka soo bandhigay, kuwaasoo Maxamed Qanyare oo ka mid ahaa uu codsaday in aanan hal qodob loo xayirin ummadda oo dhan, haddiise laga maarmi waayo ay tahay in guddi loo saaro.
Ugu dambayntii wasiir-xigeenka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa codsaday in la taageero in loo gudbo wejiga saddexaad, taasoo ay inta badan dadkii u sare kaceen, laakiin Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo koox taageersan ayaanan u sare joogsan, hase ahaatee halkaasi ayaa looga dhawaaqay in uu sidaasi ku ansaxay heshiiskii hotel Safari Park ee 29-kii bishii hore.
Ma diidmo dhab ah baa?
Cabdullaahi Yuusuf nafsad ahaantiisa hadalladiisa kama muuqan wax diidmo weyn, wuxuuse muujinayey in uu jiro khalad Soomaalida loogu sameynayo hoggaamiyeyaal cusub.
Si kastaba ha ahaatee, waxay ergadii shirka ee Mbagathi ka soo baxeen hall-kii shirka iyagoo faraxsan, gacmaha is-haysta oo heesaya, laakiin lama oga weli waxa uu Cabdullaahi Yuusuf yeeli doono, bal inuu taageero aqlabiyadda iyo in kale.
Yaa kale oo ka qeybgalay shirka?
Xafladdaasi galabta lagu ansixiyey heshiiska waxaa sidoo kale goob-joog ka ahaa qaar ka mid ah xubnaha IGAD, Midowga Yurub, iyo waddamada daneeya arrimaha Soomaaliya sida Talyaaniga iyo qaar kale. Waxaa sidoo kale joogay ergayga gaarka ee QM u qaabilsan Soomaaliya, Mr Winston Tubman.